မြန်မာနိုင်ငံမှာ မယားငယ် စနိုက်ကျော်တွေကို ထောင်ချလို့ရတဲ့ ဥပဒေ……. – Maharmedianews
လူတစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်ယုံနဲ့ အမှန်တရားတွေ မြင့်မြတ်ခြင်းတွေက ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်
“၇၂ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ” (သို့မဟုတ်) အရွယ်လွန်ခဲ့ပြီ မြန်မာပြည်
ဘုရားပေါ်မှာ ပရောဂ၀င်ပူးပြီး အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေ တောင်းစားနေတဲ့ အမျိုးသမီးကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ ခေါ်ခဲ့ရ(ရုပ်သံ)
ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတိုမြို့တွင် ရုပ်ရှင်စတူဒီယို မီးလောင်သဖြင့် လူ (၂၄) ဦး သေဆုံး
တပ်မတော်ကို အကြည်အညိုပျက်စေမှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသော ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးကို ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့်စွဲချက်တင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မယားငယ် စနိုက်ကျော်တွေကို ထောင်ချလို့ရတဲ့ ဥပဒေ…….
May 14, 2019 admin555
မယားငယ်အပျိုကို ထောင်ချလို့ရတဲ့ ဥပဒေ မြန်မာပြည်မှာရှိပါတယ်။ နိုင်လွတ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈(စ) ဥပဒေနဲ့ပါ။ အဲ့ဒီ့ဥပဒေနဲ့ မယားကြီးဖြစ်သူက မယားငယ်ကို တရားစွဲရင် အချုပ်တန်းကျပါတယ် အာမခံ လုံးဝ (လုံးဝ) မရပါ။
မြန်မာပြည်က မယားငယ်တိုင်းသည် နိုင်လွတ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈(စ)နဲ့ ငြိနေသလို တစ်လင်တမယားဥပဒေကို အားပေးအားမြှောက်မှု့ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ (၁၁၄)နဲ့ပါ ငြိနေကြပါသည်။ အဲ့သလို မယားငယ်ကို တရားပြန်စွဲနိုင်တဲ့ မည်သည့် မယားကြီးမဆို မယားငယ်ရဲ့ နိုင်လွတ်ဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၀)နဲ့ ကန်းတက် တရားစွဲဆို ခံရဖို့ မရှိနိုင်တော့ပါ။ ဘယ် မယားကြီးမှ မယားငယ်ကို ကြောက်စရာ မလိုတော့ပါ။
တရားစွဲဖို့ ရှေ့နေ မဌားနိုင်ကြရင် ပူစရာမလိုပါ။ ဒီပို့စ်ကို ရေးသူ မမလင်းက အလကားရှေ့နေရအောင် NGO အဖွဲ့အစည်းတချို့နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင့်။
၆၆ (ဃ)နဲ့ မငြိအောင် မယားငယ်နဲ့ ဖေါက်ပြန်သူကို ဘယ်လိုဝုန်းသင့်ပါသလဲ???
၁။ မိမိယောက်ကျား ဖေါက်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံသက်သေ လူသက်သေ စာသက်သေ ဗွီဒီယိုဖိုင် အသံဖိုင် ပြည့်စုံစွာ မရမချင်း လုံးဝကိုယ်သိနေကြောင်း အရိပ်အမြွက်တောင် မပြမိပါစေနဲ့။ မသိဟန်ဆောင်ပြီး ခိုင်မာတဲ့ သက်သေ အကုန်စုဆောင်းပါ။
၂။ သက်သေ အကုန်ခိုင်မာတဲ့အပြင် ဖေ့စ်ဘုတ်ဆိုတဲ့ လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်တက်ပြီး relationship တွေတင်ကြ၊ ဖက်ရက်နေတဲ့ ပုံတွေတင်တာတွေ့ခဲ့ရင် အမြန်ဆုံး SS ရိုက်ယူပြီး အကုန်သက်သေအဖြစ် သိမ်းထားကြပါ။ ရန်လုံးဝ မဖြစ်ပါနဲ့၊ သွားလဲ မဆဲဆိုပါနဲ့ဦး ဒင်းတို့ စိတ်ကြိုက် ကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ် ကြိုးကွင်းစွပ်တဲ့ ပို့စ်တွေ တင်ပါ့စေလေ။ သူတို့ များများတင်လေ ကိုယ့်အတွက် သက်သေစုံလေပါ။
၃။ သက်သေစုံပြီဆိုရင် မြန်မာပြည်တွင်းဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နိုင်ငံမှာ ရောက်နေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီ့လူရဲ့ နေရပ်လိပ်စာ မသိတောင် သူ့ကုမ္ပဏီ လိပ်စာအတိုင်း မြန်မာပြည်က ရှေ့နေဌါးပြီး ဖေါက်ပြန်တဲ့သက်သေတွေအပြည့်အစုံမို့ မိန်းမနဲ့ကလေးကို ထောက်ပံ့ဖို့ ငြင်းဆန်ရင် တလင်တမယား ၁၃ (ဃ) နဲ့ တရားစွဲဆိုတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း နို့တစ်စာ ပို့လိုက်ပါ။ နို့တစ်စာပို့ခ ရှေ့နေစရိတ် မြန်မာငွေ ၅ သောင်းကျပ်နဲ့ တစ်သိန်းဝန်းကျင်ဘဲ ကုန်ပါတယ် ညီမတို့။
၄။ ပြီးရင် မိမိတို့ လက်ထပ်စာချုပ် အိမ်ထောင်စုစာရင်းကို ကိုင်ပြီး မိမိမြို့နယ်က NLD ရုံးနဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာကို မိမိယောက်ကျားဖေါက်ပြန်နေကြောင်း သက်သေတွေပြ တိုင်ကြားထားပါ။ တစ်ခါထဲ မိမိရပ်ကွက်က ရ၀တ လူကြီးတွေဆီပါ ဖေါက်ပြန်ခံနေရပါကြောင်း မဆက်သွယ် မထောက်ပံ့လို့ သက်သေအစုံအလင်နဲ့ တရားစွဲဆိုပါတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း တိုင်တန်းထားပါ။
၅။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဝေါ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ မိမိရှေ့နေနဲ့ ပို့ထားတဲ့ နို့တစ်စာရယ် ဖေါက်ပြန်နေတဲ့ မိမိလင်ယောက်ကျားရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ဝေါပေါ်မှာ တင်ခဲ့ဖူး တင်လက်စ ဖေါက်ပြန်သူ၂ ယောက်သား ပလူးနေပုံတွေရယ်ကို တင်ပေးပြီး ကျွန်မအမျိုးသားကို ကျွန်မတော့ ကျွန်မနဲ့ကျွန်မကလေးအပေါ် တာဝန်မယူ သစ္စာဖေါက်လို့ အခုကစပြီး တရားစွဲဆိုပါတော့မယ်ရှင်ဆိုတဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မစော်ကား မစွပ်စွဲ အသရေမဖျက်ဘဲ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်ရေးပြီး ကိုယ့်သူငယ်ချင်း အတော်များများကို tags လုပ်ပြီး public ပို့စ်တင်လိုက်ရုံနဲ့ ဇာတ်လမ်းပြတ်ပါတယ် ညီမတို့ရေ။ မိမိယောက်ကျားဖုန်းထဲက ဒီပုံတွေကို မိလို့ မယားရှိလင်မှန်း သူနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေ သိအောင် အများသိစေရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုရင်ဘဲ ဘယ်သူမှ ဘာပုဒ်မနဲ့မှ လာတပ်ပြီး တရားစွဲလို့မရပါ။
၆။ ဒါတွေ မလုပ်ခင်မှာ မိမိယောက်ကျားနဲ့ မိမိယောက်ကျားနဲ့ပတ်သက်နေသူ အမျိုးသမီးရဲ့ အကောင့်ထဲက သူတို့သူငယ်ချင်းတွေကို အကုန် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအဖြစ် လိုက်အက်ထားဖို့လဲ မမေ့နဲ့ပေါ့။
၇။ နောက်ဆုံး အခုလို ပို့စ်တင်ပြီး ခေါင်းရောင်းရဲသူ ညည်းတို့ရဲ့ မမလင်းကိုလဲ မမေ့မလျော့ tag ကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့လို့ 😜
ဘ၀တူ ကိုယ့်ညီမအရွယ် ကိုယ့်အမအရွယ် ကလေးအမေတွေ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး အန္တာရာယ်ကင်း လမ်းစတွေ့ စိတ်အေးချမ်းကြပါစေရှင့်။
← တောလမ်းမှာ ကျားနဲ့တွေ့လို့ ၀ါးပင်ပေါ်တက်ပုန်းခဲ့ရတဲ့ ကရင်ဆရာမတစ်ဦးနဲ့ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်း(ရုပ်သံ)
“ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ မိခင်ကြီးကို ပြုစုဖို့ အနုပညာအလုပ်တွေကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တာ” ဆိုတဲ့ မိုးဟေကို (ရုပ်သံ) →
July 19, 2019 admin555 Comments Off on လူတစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်ယုံနဲ့ အမှန်တရားတွေ မြင့်မြတ်ခြင်းတွေက ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်
ဤကမ္ဘာမြေပေါ်ဝယ် သတ်၍ မသေသောလူမျိုးသည်ရှိ၏။ ဒဏ္ဍာရီထဲမှ ဗျတ်ဝိ၊ ဗျတ္တစသော ကာယသိဒ္ဓိပြီး နေသူမျိုးကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကွယ်လွန်ပျက်စီးသွားသော်လည်း သူ၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် နာမည်ဂုဏ် သတင်းသည်လောကအလယ်တွင်သင်းပျံ့ကာ ကျန်ခဲ့သူကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၈၆၅ ဧပြီလ ၁၄ ရက် ည ၁ဝ
July 19, 2019 admin555 Comments Off on “၇၂ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ” (သို့မဟုတ်) အရွယ်လွန်ခဲ့ပြီ မြန်မာပြည်
July 18, 2019 admin555 Comments Off on ဘုရားပေါ်မှာ ပရောဂ၀င်ပူးပြီး အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေ တောင်းစားနေတဲ့ အမျိုးသမီးကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ ခေါ်ခဲ့ရ(ရုပ်သံ)
July 18, 2019 admin555 Comments Off on ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတိုမြို့တွင် ရုပ်ရှင်စတူဒီယို မီးလောင်သဖြင့် လူ (၂၄) ဦး သေဆုံး
July 18, 2019 admin555 Comments Off on တပ်မတော်ကို အကြည်အညိုပျက်စေမှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသော ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးကို ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့်စွဲချက်တင်
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်နေ
July 18, 2019 admin555 Comments Off on ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်နေ
မတရာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီး ငွေ (၂၆)သိန်းကျော်တောင်းသဖြင့် တရားစွဲခံထားရသော မြို့နယ်မှူးနှင့် အမှုစစ်တို့ကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေး
July 18, 2019 admin555 Comments Off on မတရာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီး ငွေ (၂၆)သိန်းကျော်တောင်းသဖြင့် တရားစွဲခံထားရသော မြို့နယ်မှူးနှင့် အမှုစစ်တို့ကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေး
တစ်ခေတ်တစ်ခါက အတားဆီး အနှောက်အယှက်များကြားမှ အာဇာနည်များကို တစ်ကိုယ်တော် အလေးပြု ဦးညွှတ်ခဲ့သူ
July 18, 2019 admin555 Comments Off on တစ်ခေတ်တစ်ခါက အတားဆီး အနှောက်အယှက်များကြားမှ အာဇာနည်များကို တစ်ကိုယ်တော် အလေးပြု ဦးညွှတ်ခဲ့သူ
နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကျော်အတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ဂါရ၀ပြုမည့် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား
July 18, 2019 admin555 Comments Off on နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကျော်အတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ဂါရ၀ပြုမည့် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား
ရန်ကုန်၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့ ၌ပြုလုပ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးထောက်ခံပွဲတွင် နှာခေါင်းစည်းတပ် လူတစ်ချို့က လာရောက်နှောက်ယှက်
July 18, 2019 admin555 Comments Off on ရန်ကုန်၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့ ၌ပြုလုပ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးထောက်ခံပွဲတွင် နှာခေါင်းစည်းတပ် လူတစ်ချို့က လာရောက်နှောက်ယှက်
Maharmedianews.com is provides knowledge, life style, breaking news, local and international news.
Visitors can read news in articles with in text, video and photo.There are many types of categories in https://server3.websiteserverbox.com/~maharmed/ (example – News, Entertainment, Knowledge, Health, Celebrities, Media & Music….etc).